Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: malaza TGV ny lamasinina Fotoan-gasy no ifanaovana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: malaza TGV ny lamasinina Fotoan-gasy no ifanaovana
Mbola tsy nisy toy ny tamin’ity indray mitoraka ity. Nahemotra roa andro ny fe-potoana ahafahana mametraka ny filatsahana ho fidiana solombava-bahoaka. Jery vilana ihany anefa ny fomba fiheverana an’izany. Sarotra ny hino fa ny tsy fahavononan’ny pitsopitson’ireo karazana taratasy maro ilaina eo amin’ny fametrahana ny filatsahana no anton’ny havitsian’ny isan’ny mpilatsaka. Tsy voalohany izao no nisy fifidianana, mbola tsy niseho ny tranga toy izao, raha tsy diso ny fitadidiana.
Tamin’ny fifidianana depiote talohan’izao, roa arivo mahery ny mpilatsaka, nametraka ny taratasy sady ara-dalàna no ara-potoana. Tamin’ity indray mandeha ity, vitsy noho izany ny isan’izy ireo, notsotsofina vao tafakatra isa mareforefo rehefa nipaika ny ora farany hany ka voatery nandray fepetra fanalavam-potoana ny tompon’andraikitra. Azo heverina fa olona iray na roa noho ny fahazarana mitrandrevaka na noho ny sampona mety nitranga no diso fotoana fa tsy mpandeha amanjatony no samy ho taran’ny fiaingana avokoa. Toy ny voalaza tetsy aloha, fisisihana eo am-pidirana no mazana niseho.
Tamin’ity, lasa toy eny amin’ny fiantsonan’ny taksibe amin’ny fotoana mampitsitaitaika ny mpitaingina ka mitarika ny resevera hiantsoantso sy handodona ny mpandeha izay tsy rototra mihitsy. Inona ary no anton’izao fisalasana izao ? Raha nifandrombahana ny toerana teo aloha, nahoana ankehitriny tampotampoka eo dia toy lany ny fahazotoana handray an’izany andraikitra depiote izany ? Tsy nanimbihana anefa na ny voninahitra na ny tombontsoa sandan’ ny fanefana an’io adidy io. Angamba noho ny fampiharana ny lalàna araky ny fanamby nataon’ny Filoha tamin’ny vahoaka dia teraka ny ahiahy any an-tsainan’ireo olona mino sy manantena fa ahafahana manjakazaka sy manao izay danin’ ny kibo tsy an-drariny dia ao anatin’ny zo sy fahefan’ny mpanao pôlitika. Raha manatanteraka ny fampanantenana nomeny Andry Rajoelina dia tapitra eo ny fivalamparana amin’ny fanaovana ny tsy rariny. Tsy nampoizin’ny ankamaron’ny mponina anefa ny fihemoran’ny mpilalao pôlitika toy izao fitsoahany an-daharana izao.
Azo heverina fa maro ireo olom-pirenena manam-panahy sy fahendrena no manam-panirina sy fahavonona amin’ ny fandraisana anjara eo amin’ny sehatry ny raharaham-pirenena nefa nifehy tena ambony ihany noho ny tsy fitiavany hifanjevo ao anatin’ny dobo mandrevo fotaka. Raha madio ny rano nitana angamba rahampitso dia amin’ny manaraka malalaka ny firobohan’ny mazava fo sy madio saina tsy ankanavaka na madio lamba na tsotso-piaina.